ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်က ရလိုက်သည့် သင်ခန်းစာ (၃) ခု | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်က ရလိုက်သည့် သင်ခန်းစာ (၃) ခု
ဖင်လန်နိုင်ငံသည် အခြားသော နိုင်ငံများထက် ဘာသာစကား၊ သင်္ချာနှင့် သိပ္ပံပညာရပ်များတွင် အထူးချွန်ဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ကလေးများသည် အသက် ၇ နှစ်ပြည့်မှ ကျောင်းတက်ကြရသည်။ အသက် ၇ နှစ်အရွယ်ကို သူတို့က သင်ယူရန် အကောင်းဆုံးနှင့် ဥာဏ်ရည်အဖွံ့ဖြိုးဆုံးအရွယ်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးတိုင်းအတွက် မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ကို ပြဌာန်းပေးထားသည်။
ကျောင်း၏ စာသင်ချိန် အတိုဆိုး၊ ကျောင်းသားဦးရေ အနည်းဆုံး စာသင်ခန်းများဖြင့် သင်ကြားမှုများကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး အိမ်စာကို လုံးဝမပေးသလောက်ဖြစ်ပါသည်။
စာမေးပွဲများကို အခြားနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပသလို ဦးနှောက်ခြောက်လောက်အောင် စာတွေကျက်ပြီး ဖြေကြားခိုင်းခြင်းလည်း မရှိပေ။ စာမေးပွဲမရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
စာမေးပွဲမရှိသလို အဆင့်သတ်မှတ်ချက်လည်းမရှိ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိ၊ ထူးချွန်စံပြကျောင်းသားဆိုသည်လည်း မရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင် အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆင်းသော ကျောင်းသား အရေအတွက်သည် ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း သာပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ပြီးနောက် ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တက္ကသိုလ်ပညာကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအထဲတွင် တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ကြသည့် အရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်သည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေးမှ ရရှိလိုက်သည့် သင်ခန်းစာသုံး
၁. ကလေးများကို ကစားခိုင်းခြင်း
ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ကလေးများသည် တစ်နေ့လျှင် အတန်းသုံးခုမှ လေးခုသာ တက်ကြရသည်။ ကျောင်းချိန်အတွင်း၌လည်း မကြာခဏ အားလပ်ချိန်များ ပေးထားသေးသည်။ ကလေးများကို အချိန်အကြာကြီး ထိုင်ခိုင်းခြင်းထက် ကစားပြီးတွေးခိုင်း၊ လှုပ်ရှားပြီး သင်ခန်းစာများကို ဖန်တီးတတ်စေရန် အလေးပေး ထားပါသည်။
၂. ဆရာကို ရိုသေလေးစား
ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် မူလတန်းဆရာအလုပ်သည် အလွန်ဂုဏ်ရှိသလို၊ မူလတန်းဆရာတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဘွဲ့များကလည်း အလွန်မြင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆရာအဖြစ် လျှောက်ထားသူ အရေအတွက်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လက်ခံလေ့ရှိသည်။
ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် အရည်အချင်း ဘွဲ့လက်မှတ်များအပြင် အင်တာဗျူးပေါင်းများစွာကိုလည်း ဖြတ်သန်းရပြီုး အမျိုးမျိုးလေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ ပညာရှင်များက မှတ်ချက်ပေးပြီးမှသာ ခန့်ထားလေ့ရှိပြီး အနည်းဆုံးဘွဲ့မှာ Master Degree ဖြစ်သည်။
ဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်သူတစ်ဦးသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့လက်မှတ်များအပြင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့များရထားမှ မိဘများကလည်း အထင်ကြီးလေးစားကြသည်။
မိဘများကလည်း သားသမီးများကို သင်ကြားသည့်ဆရာများကို အထူးစောင့်ကြည့်နေကြပြီး ဆရာများကလည်း လွတ်လပ်စွာ တီထွင်ဖန်တီးသင်ကြားခွင့်အပြည့်ရှိပါသည်။
၃. တစ်ဦးချင်း အရည်အသွေး အလေးပေး
ဖင်လန်နိုင်ငံ စာသင်ခန်းများသည် ကျောင်းသားဦးရေ အလွန်နည်းပြီး မူလတန်းဆရာတစ်ဦးသည် သူ၏ ကလေးကို တစ်ပါတည်း ၆ နှစ် ဆက်တိုက် သင်ကြားသွားရသည်။ ဥာဏ်ရည် အားနည်းသူများ စာမလိုက်နိုင်သည့် ကလေးများကို သီးခြား အချိန်ပေးပြီး ပြန်လည် သင်ကြားပေးသည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံပညာရေးစနစ်တွင် ကျောင်းသားများကို စိတ်ဖိစီးမှု မရှိစေရန် အလေးပေးသည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း၊ ပိုင်းဖြတ်ဝေဖန်နိုင်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်စေရန် ဆရာများက ကျောင်းသားများကို အလေးပေးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။
International/Private Read 1596 times